16 September 2021 Volume :9 Issue :40
I-UKZN YiNyuvesi Yokuqala e-Afrika ukuhlonishwa nge-ISOCARP Bronze Membership
USolwazi Hangwelani Magidimisha-Chipungu oklonyeliswe ngokuhlonishwa nge-Bronze Membership i-ISOCARP.Click here for English version
Isikole Sezifundokuhlelwa Komumo Wezakhiwo kanye neNtuthuko eKolishi lezesiNtu siklonyeliswe ngokuhlonishwa nge-Bronze Membership yi-International Society of City and Regional Planners (i-ISOCARP).
I-UKZN yinyuvesi yokuqala yase-Afrika ukunikwa ubulungu obunjalo kusukela i-ISOCARP yasungulwa eminyakeni engama-57 edlule.
Lo mklomelo, onobulungu bamahhala beminyaka emithathu kulenhlangano, unikwe umfundisi Wezokuhlelwa Kwamadolobha, uSolwazi Hangwelani Magidimisha-Chipungu, oneminyaka emibili enesikhundla kwi-ISOCARP.
‘Lolu wuphawu lwenhlonipho kimina emkhakheni Wezokuhlelwa Kwamadolobha NeZifunda,’ kusho uMagidimisha-Chipungu. ‘Lulandela iminyaka yobuholi bokuzinikela kuloMkhakha engeseke ngawo isikole, ozakwethu kanye nebhodi labafundi. Okunye wukuthi kuwumvuzo womsebenzi engiwenza ngemuva onganakekile kwi-ISOCARP kusukela ngowezi-2015.’
Ukuthola lobubulungu uMagidimisha-Chipungu ukuthatha ‘njengobufakazi bokwesekwa yisikhungo seNyuvesi ebiqhakambisa ubudlelwano namalungu e-ISOCARP eminyakeni edlule. Ngaleyo ndlela, ibonisa isahluko esisha ekusimameni kwaloMkhakha njengoba uzilungiselela indawo emhlabeni jikelele. Okukhulu kakhulu wukuthi akukaze kwenzeke emlandweni wesikole noweKolishi, ngakho kuzophosa esivivaneni esahlukweni esisha ezethamelini zomhlaba wonke wonke.’
IDini neNhloko yesikole, uSolwazi Ernest Khalema, uhalalisele uMagidimisha-Chipungu ngempumelelo yakhe, wathi: ‘Igama le-UKZN liphakeme ngenxa yobuholi bakhe bekhethelo. Halala emkhakheni, esikoleni naseNyuvesi ngokuhlale iseseka.’
UMengameli we-ISOCARP, uMnu Martin Dubbeling, wengeze ngokuthi: ‘USolwazi Magidimisha-Chipungu namanje usakhuthele kanti wabaneqhaza empumelelweni yama-56 neyama-57 ISOCARP World Planning Congress. Ibhodi ye-ISOCARP ibonga isikhathi nomsebenzi wakhe ekuhleleni wonke amaphepha nawo wonke amalungiselelo adingekayo.’
Eminyakeni edlule uMagidimisha-Chipungu ubebutha imiklomelo ezingeni lakhe, lesikhungo, lezwe nelomhlaba wonke; konke ukwazisa kakhulu. Ubalule ukuthi i-Bronze Membership iphakamise igama lakhe ezingeni lomhlaba.
‘Ixoxa indaba yomsebenzi wami wokuzikhandla, ukuzidela nokuphokophela ezingeni lokusebenza emhlabeni ngokwandisa amathuba ami ngaphandle kwezwe. Ubuhle esibenza ezimpilweni zethu abuveli emazwini ethu kepha bubonakala ngezimpilo zalabo esibathintayo,’ kwengeza yena.
Indikimba yama-57 ISOCARP World Planning Congress ithi Planning Unlocked: New Times, Better Places, Stronger Communities. Le ndlela yengqungquthela eyindidiyela yenza izethameli zikwazi ukuya kuyona siqu e-Doha e-Qatar noma ziyethamele ezinkundleni zokuxhumana ngobuchwepheshe besimnje.